Izinto eziluncedo nezingeloncedo ejolise umfuziselo nebhodi le pa parlour
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Izinto eziluncedo nezingeloncedo ejolise umfuziselo nebhodi le pa parlour
imifuziselo lophawu, ndifuna ukudlala abathengi abaninzi kule pa parlour, 's imveliso iyavela. imifuziselo lophawu, kodwa ezahlukeneyo kwivenkile nganye, thina sidla kukho imifuziselo ezininzi kuthotho ethandwayo-elide bemi. Ethetha kutheni, la manqaku ezithandwayo liphuma Xintai ukusuka ecaleni kwelandelayo. Le modeli lwe thotho efanayo, xa kakhulu Tsukaere njengomzekelo ngundoqo, le ivenkile kukuba le modeli enokudala elinamandla kunye nomfanekiso.
Ngoko ke, ndingathanda ukuba ujongo kwi eziluncedo nezingeloncedo liwubethileyo loo kusoloko kukho imifuziselo umqondiso na, nesendlu pa.
njengoko iingenelo, na uzinzile kwaphela. Xa uhlengahlengiso nail ethile kunye Horukon sentlalo, ndicinga ingongoma inkulu uzinzile kangako. imifuziselo lophawu, kuba ngumqondiso ekudaleni esitratweni ivenkile umfanekiso igama layo, ingumzekelo ukuba asikwazi lula okanye etafileni lonke kumatshini ekuphulukenwe nalo. Ngokukodwa, ukuba ivame kukho ezininzi ukusayina imifuziselo, loo utyekelo iya kuqina.
uhlengahlengiso isikhonkwane, kunokwenzeka ukuba uzinzile, ekubeni isantya ojikeleza ngaso, umzekelo amawaka yen usoloko kuzinza, nto ngokulula iphawulwe umlinganiselo lotyalo-mali, kukuba ekulweni data ebomini kunokuba. Umyinge emhlabeni, nayo imifuziselo ibhodi yezaziso eliphezulu bahlale yonke imihla, babe ukuhlangabezana ngokukhawuleza woMphathiswa, kokukhona hit ngokwemvelo avareji. Idatha ngaphezulu, ngokunjalo nayo zingasetyenziswa njenge izinto nokuzimisela ukufunda igagasi Horukon kunye ROM ukulwa apho kuya kubakho kwi basemngciphekweni.
Ukongeza, ekubeni imifuziselo ibhilibhodi rhoqo pa parlour ukuba sele ifakiwe ngakumbi inani, kukuba hlengiso kuzipho etafileni lonke yonke imihla, kuya kubakho ngexesha akunakwenzeka. Ukuba ngaphezu Horukon iseti Hanemono ukunyenyisa ibhola anikhuphe uhlengahlengiso isikhonkwane, inombolo yetyala njengoko kwiivenkile ezinkulu inkulu, apho njengomnye izicwangciso yaloo njongo kuhlehliselwe.
engxakini kukuthi, ethetha ukuba, ngokwenene ukusayina imifuziselo, ukunyuka rhoqo, kukuba zokukhusela kweqonga unzima. Ivame, uza siwatyelele ejoliswe imodeli ibhilibhodi le venkile. Wonke umntu, loo nto yabonakalayo yoyikeka ebikubetha accumulated ivame ukuba asayine imifuziselo Ndicinga kukhona.
loo nto, ivame pa ivenkile aba a lot, lilungiselelo pre-lokuvula ilungile, ngena kuphela imodeli ukususela kusasa libe imeko kuhlale ophezulu. Wave olungileyo itheyibhile imodeli ibhodi yezaziso nganye kukuba akukho nto uhlale phantsi ukuya kwenye kusasa. Sazama ukwandisa iinzuzo kunye ezingalunganga yemodeli ibhilibhodi, ngcono iingenelo, nge-avareji, ngokufuthi, liya kusayina imodeli. Ukuba ulahlekelwe kwimodeli elikhethiweyo, kusenokuba bubulumko ngayo ukuzama ukubetha umfuziselo nebhodi.